China Net Frame, Heterosexual Structure klas ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Zhenyuan
Ihe ndi ozo nke grid bu triangular cone, triangular body, cube, truncated quadrangle na ihe ndi ozo. uru nke ohere ike, ìhè arọ, nnukwu isi, ezi seismic arụmọrụ, wdg Ọ ga-eji dị ka ụlọ nke mgbatị ahụ, ihe nkiri, ngosi ulo, na-eche ụlọ nzukọ, ámá egwuregwu guzoro okwuchi windo, ugbo elu hanga, ụzọ abụọ nnukwu kọlụm okporo Ọdịdị na ogbako na ụlọ ndị ọzọ.
Nhazi ọkwa nke grid:
Ihe mejuputara klaasị nke mbu bu usoro ugbo elu, nke gunyere uzo ano, ya bu, uzo uzo uzo uzo uzo uzo uzo abuo, uzo icho uzo uzo ato na uzo uzo ato.
Typedị nke abụọ bụ nke akụkụ anọ pyramidal mejupụtara. Enwere uzo ise: uzo uzo di nma, uzo di nma, uzo obula nke uzo, uzo ozo nke uzo na uzo nke uzo.
Typedị nke atọ nwere nkeji pyramidal triangular. E nwere ụdị atọ nke ụgbụ pyramidal atọ, ndị na-ewepụta ụgbụ tricone na ụgbụ ụgbụ tricone. , enwere grid nke nchara, igwe eji eme ka ihe sie ike na nchara na nke siri ike mejuputara, nke eji eme ihe kariri.
Nyocha nke ike dị n'ime grid:
Ngwurugwu grid bu usoro di elu nke enweghi ike ichoputa ya. Na nyocha nke ihe nkpuchi efere, a na-eche ya na nkwonkwo na-adabere, ma na-arụ ọrụ mpụga na nkwonkwo dịka ụkpụrụ ahụ kwekọrọ, nke nwere ike ịbụ gbakọọ dị ka usoro mwepụ nke oghere dị, nke bụ usoro mmewere nke usoro mkpanaka usoro.Splplified ngụkọta oge usoro, dị ka cross doo usoro dị iche analysis usoro na efere - dị ka usoro, nwekwara ike-eji gbakọọ esịtidem agha na displacements. nke otu oyi akwa shei truss na-adịkarị chere na-isiike-nkwonkwo, nke a ga-gbakọọ dị ka nwere oke mmewere usoro nke isiike-nkwonkwo system.The abụọ shei okporo nwere ike gbakọọ site nwere oke mmewere usoro nke hinged mkpanaka usoro. -izi usoro nwekwara ike iji mee ka mfe ngụkọta oge nke otu-oyi akwa na abụọ-oyi akwa shei okporo owuwu.
Nhazi usoro nke okporo:
Ekwesịrị ikpebi akụkụ obe nke ihe nrụpụta dabere na ngụkọta nke ike na nkwụsi ike. Iji belata ngụkọta ogologo nke ogwe nrụgide ahụ ma bulie nkwụsi ike ya, enwere ike ịme ihe dịka ịgbakwunye ogwe redividing na ụlọ nkwado nke ụdị efere na ụdị okpukpu okpukpu abụọ nke e ji ígwè mee bụ nke gụnyere ụzọ atọ: nkwonkwo obe, nkwonkwo oghere na-acha ọkụ na nkwonkwo bọl. Njikọ efere efere kwesịrị ekwesị maka ihe owuwu nke mkpanaka ígwè. , na mkpanaka na efere efere jikọtara ya site na ịgbado ọkụ ma ọ bụ nnukwu ike bolts.Hollow nkwonkwo bọl na nkwonkwo bọl na-adabara maka ihe owuwu nke ọkpọkọ ọkpọ.Ọkpụkpụ njikọ nke otu-shei grid nhazi ga-enwe ike iguzogide ekwe ikike dị n'ime. N'izugbe, nchara oriri nke nkwonkwo na-eme ihe dịka 15 ~ 20% nke nchara eji arụ ọrụ dum nke usoro grid ....
Atụmatụ ala nke ntupu etiti
Atụmatụ ala nke okporo
Ihe eserese ọnụ ọnụ ọnụ
Atụmatụ nke eriri ala nke ụgbụ etiti
3D ọnụ imewe ịbịaru nke okporo
Nke gara aga: Iwu mmiri na ọkụ eletrik atụmatụ
Osote: Klaasị usoro nhazi
Ntughari uzo Portal
Ogwe Oghere Oghere
Nhazi Designlọ Steellọ